Kudzora Kwehunhu - Sekonic Metals Technology Co, Ltd.
Sekoin Metal se ISO9001: 2000 inogadzirwa mugadziri, isu takachinjisa yakakwana uye inoshanda yehutano vimbiso system. Nhanho yega yega yekugadzirwa Kubva paRas Raw Material Simbi Inonyunguduka kuenda kuKuchekesa Mahcining yakapedzisa, isu tinodzora iko kwese kugadzirisa nekuchenjerera.
Kujairira kuongorora kunozotorwa panguva uye mushure mekugadzirwa. Zvikwata zvine ruzivo, inoshanda manejimendi sisitimu, nzira dzepamberi uye kugadzira michina kunovimbisa kugadzikana kupihwa kwezvakanaka uye zvakavimbika zvigadzirwa.
Yega yemhando dhipatimendi uye bvunzo nzvimbo yakagadzwa mu2010.Hurumende yekuyedza zvishandiso uye vakanyatsodzidziswa vashandi vari mukutarisira mhando kutonga. Ivo vane zvakapfuma zviitiko uye vane basa rekutonga uye kuyedza kweyakagadziriswa yese kubva kune yakasvibirira zvigadzirwa kune semi-apedza zvigadzirwa kune akapedza zvigadzirwa.
Inspection Zvishandiso kune Guarantee Hwakanaka
Tenslie & Kubereka Simba bvunzo
Pamusoro Kuona kuongorora
Carbon Sarufa kuongorora
Ultrasonic Kukanganisa Kuonekwa
Dhayi inopinda mukati
Eddy Yazvino Test michina
CNC Bolt Muchina
Hydrostatic Kwayedza michina
Yechitatu Bato Kuongorora:
Yechitatu Bato Kuongorora kunogona kupihwa zvinoenderana nekutenga kwevatengi. isu takazvipira kuyedza kwedu kwemhando yepamusoro kunzvimbo inesimba kwazvo yeNon-ferrous Metals Analysis uye Kwayedza muChina kubvira 2010. Zita rebazi iri ndi: Shanghai General Research Institute yeNon-ferrous Metals Analysis uye Testing Institute. Iyo state-run Institute, uye yakanakisa Institute yeasina-ferrous simbi kuongororwa uye kuyedzwa. Zvichakadaro, iyo SGS, TUV, bvunzo bvunzo dzinowanikwawo.
Stellite 6, Chiwanikwa R26 bhaudhi, Haynes 25 Waya, stellite mhete, Welding waya, Stellite 6B,